Monday June 03, 2019 - 12:16:27 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar qorsheysan oo Saacadihii lasoo dhaafay Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin ay ka fuliyeen duleedka magaalada Mandheere oo ka mid ah Dhulka Soomaalida NFD ee gummeysiga Kenya kujira.
Weerarkan oo ahaa mid qarax ah waxaa lala beegsaday gaari nuuca dagaalka ah oo wateen ciidamada melleteriga dowladda Kenya.
Qaraxan waxa uu sigaar ah uga dhacay inta u dhaxaysa Tuulooyinka Jambi iyo Bambo oo wada hoostaga magaalada Mandheera waxaana jira khasaara soo gaaray ciidamada Kenya ee qaraxa lagu beegsaday.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya in qaraxaasi lagu burburiyay Gaari Kooyal ah Sidoo kale qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday Askartii Kenyaatiga ee la socday gaariga qaraxu burburiyay.
Ciidamada Al Shabaab ayaa weeraro culus ka fuliya gudaha dalka Kenya iyo dhulka NFD ee gummeysiga kujira Iyadoona Weeraradaasi Dowladda Kenya ay ku weysay Saraakiil,Askar iyo Xubno iyada Mmuhiim u ahaa.
Tan iyo markii ay bilatay bisha barakeysan ee Ramadaan ayay xoogaga Al Shabaab gudaha Kenya ka fuliyeen weerar dhiig badan ku daatay kuwaas oo lala beegsaday ciidamada booliska iyo Melleteriga.